Xbox One မှာ 120Hz Refresh Rate နဲ့ ဆော့ကစားနိုင်တော့မည်
24 Apr 2018 . 11:32 AM
လက်ရှိအချိန်မှာ Gaming Console ဈေးကွက်မှာ အမြဲတမ်းပြောခံနေရတာတစ်ခုကတော့ Gaming Console တွေဟာ PC တွေလိုမျိုး Refresh Rate အမြင့်တွေနဲ့ဆော့ကစားလို့မရနိုင်ပဲ 30fps နဲ့ပဲ ဆော့ကစားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက ယခင်အချိန်အထိတော့မှန်ကန်တဲ့အချက်တစ်ခုပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ Sony PlayStation4Pro မှာ ဆိုရင် 4K HDR ကို 60fps အထိရရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တဖြည်းဖြည်း PC နဲ့ Console အကြားက Refresh Rate ကွာခြားမှုက လျော့နည်းလာတယ်လို့ ပြောလို့ရလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် PC တွေလိုမျိုးတော့ 144Hz Refresh Rate နဲ့ 240Hz Refresh Rate တွေကိုတော့ ဆော့ကစားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
အခုအချိန်မှာတော့ Microsoft ရဲ့ ထပ်မံကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ Xbox One Console ဂိမ်းစက်တွေကို 120Hz Refresh Rate နဲ့ လာမယ့် မေလ Software Update ပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့ ဆော့ကစားနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ပိုပြီး မြင့်မားလာတဲ့ Refresh Rate ကြောင့် Xbox One ရဲ့ ဂိမ်းတွေက ပိုပြီး Smooth ဖြစ်လာပြီး Responsive ပိုဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သင့်မှာ Xbox One S ဒါမှမဟုတ် Xbox One X ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ 4K Gaming အတွက်က 120Hz Refresh Rate က ဂိမ်းတွေကို ကောင်းကောင်း Handle လုပ်နိုင်ဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကလည်း Xbox Console ထက် လက်ရှိ TV နဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့ HDMI 2.0 က 4K Resolution ကို 60fps ပဲ Support ပြုလုပ်နေသေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် HDMI 2.1 မှာတော့ အခုပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Xbox One 120Hz Refresh Rate
အဲ့ဒီအတွက် အခုလောလောဆယ်မှာ Xbox One Console လည်းရှိနေပြီးတော့ 120Hz Refresh Rate ကို Resolution အမြင့်ဆုံးနဲ့ ဆော့ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 1440p Resolution မှာပဲ 120Hz Refresh Rate ကို Support ပြုလုပ်တဲ့ Monitor နဲ့ ဆော့ကစားမှပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုမျိုး Game Console တွေမှာ သိသိသာသာပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေရှိလာတာကတော့ ဝမ်းသာစရာပါ။
Ref : Trusted Reviews
လကျရှိအခြိနျမှာ Gaming Console ဈေးကှကျမှာ အမွဲတမျးပွောခံနရေတာတဈခုကတော့ Gaming Console တှဟော PC တှလေိုမြိုး Refresh Rate အမွငျ့တှနေဲ့ဆော့ကစားလို့မရနိုငျပဲ 30fps နဲ့ပဲ ဆော့ကစားနိုငျတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါက ယခငျအခြိနျအထိတော့မှနျကနျတဲ့အခကျြတဈခုပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ Sony PlayStation4Pro မှာ ဆိုရငျ 4K HDR ကို 60fps အထိရရှိလာပွီဖွဈတဲ့အတှကျ တဖွညျးဖွညျး PC နဲ့ Console အကွားက Refresh Rate ကှာခွားမှုက လြော့နညျးလာတယျလို့ ပွောလို့ရလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ PC တှလေိုမြိုးတော့ 144Hz Refresh Rate နဲ့ 240Hz Refresh Rate တှကေိုတော့ ဆော့ကစားနိုငျခွငျးမရှိသေးပါဘူး။
အခုအခြိနျမှာတော့ Microsoft ရဲ့ ထပျမံကွိုးပမျးမှုတဈခုအနနေဲ့ Xbox One Console ဂိမျးစကျတှကေို 120Hz Refresh Rate နဲ့ လာမယျ့ မလေ Software Update ပွုလုပျပွီးတာနဲ့ ဆော့ကစားနိုငျတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ အခုလိုမြိုး ပိုပွီး မွငျ့မားလာတဲ့ Refresh Rate ကွောငျ့ Xbox One ရဲ့ ဂိမျးတှကေ ပိုပွီး Smooth ဖွဈလာပွီး Responsive ပိုဖွဈလာမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သငျ့မှာ Xbox One S ဒါမှမဟုတျ Xbox One X ရှိနတေယျဆိုရငျတော့ 4K Gaming အတှကျက 120Hz Refresh Rate က ဂိမျးတှကေို ကောငျးကောငျး Handle လုပျနိုငျဦးမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါကလညျး Xbox Console ထကျ လကျရှိ TV နဲ့ ခြိတျဆကျတဲ့ HDMI 2.0 က 4K Resolution ကို 60fps ပဲ Support ပွုလုပျနသေေးတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ လာမယျ့ HDMI 2.1 မှာတော့ အခုပွဿနာကို ဖွရှေငျးနိုငျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ အခုလောလောဆယျမှာ Xbox One Console လညျးရှိနပွေီးတော့ 120Hz Refresh Rate ကို Resolution အမွငျ့ဆုံးနဲ့ ဆော့ကစားခငျြတယျဆိုရငျတော့ 1440p Resolution မှာပဲ 120Hz Refresh Rate ကို Support ပွုလုပျတဲ့ Monitor နဲ့ ဆော့ကစားမှပဲရမှာဖွဈပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ အခုလိုမြိုး Game Console တှမှော သိသိသာသာပွောငျးလဲတိုးတကျမှုတှရှေိလာတာကတော့ ဝမျးသာစရာပါ။
by 2B .7days ago